Ibonwe kangaphi 46 (Ama)Ixesha #IPasika #Usindiso #Intlekele
Ngowuphi uMthendeleko Oqukethe Isithembiso sikaThixo sokuba Iintlekele Ziya Kudlula Kuthi?
KwiTestamente eNdala, amaSirayeli asindiswa ngegazi lemvana yePasika. Oku kubonisa ukuba abo banegazi likaYesu, oweza njengeMvana yePasika, banokusindiswa yaye abo bangenalo igazi Lakhe kubo baya kufumana iintlekele.
“IBandla likaThixo” Ligcina iPasika yoMnqophiso oMtsha Ngokuthobela iBhayibhile
Xa sithatha inxaxheba kumsitho ongcwele wePasika wokutya inyama kaThixo kunye nokusela igazi Lakhe, iintlekele ziyadlula kuthi ngenxa yokuba uThixo ungaphakathi kwethu. Ngapha koko, sinokutywinwa njengabantwana bakaThixo uBawo noThixo uMama.
“UMoya ngokwakhe ungqinelana nomoya wethu, ukuba singabantwana bakaThixo.” KwabaseRoma 8:16
“Lowo uyidlayo eyam inyama, alisele elam igazi, unobomi obungunaphakade; ndaye mna ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela… Lowo uyidlayo eyam inyama, alisele elam igazi, uhleli kum, nam ndihleli kuye.” Yohane 6:54–56
IZulu okanye isiHogo ngokweZenzo Zomntu